FIBC Fabric Cutting Machine, FIBC Nhicha igwe - VYT
Automatic Jumbo akpa nhicha Machines Air Washer ...
Jumbo Bag echebe webbing FIBC nnukwu bag loop Cuttin ...
FIBC Pee Film Auto Bottle udi Liner akara Cu ...
Taa, ọtụtụ ndị ahịa nwere afọ ojuju maka ogo na ntụkwasị obi nye ọrụ na ngwaahịa anyị. Anyị ga-melite ọrụ anyị na ngwaahịa dị iche iche iji mejuo ndị ahịa anyị site na isoro teknụzụ ọhụrụ na mkpa ahịa.
Na ike oru nkwado, elu nhazi akụrụngwa, na ndabere nke na-aga n'ihu iwebata na absorption nke mba ọzọ elu technology, jikọtara na ọtụtụ afọ nke n'ibu n'ichepụta ahụmahụ, anyị mepụtara mmepụta ngwá nke jumbo akpa Ndinam igwe.
Anyi buuru ulo oru ihe eji edozi akpa jumbo nke nwere uchu. "Ahịa ahịa, Zụlite ọnụ" bụ ụkpụrụ gbanyere mkpọrọgwụ n'obi ndị mmadụ ọ bụla. Site na ụkpụrụ nke ụkpụrụ ahụ, ndị ahịa ụwa anyị na-amata anyị nke ọma.
Anyị na-ebupụ ngwaahịa anyị gaa na mba 50 na mpaghara dịka Middle East, Russia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Africa. Ngwaahịa na ọrụ anyị nwere aha ọma n'ụwa niile.
Xuzhou VYT Machinery and Technology Co., Ltd. ezubere ịzụlite na imepụta ihe niile metụtara FIBC, ahaziri nke ọma na injinịa maka FIBC inyeaka na akụrụngwa na-emecha ngwa. Anyị na-arụpụta igwe maka imepụta FIBC ọtụtụ afọ, igwe VYT na-enye ndị ahịa ya ọrụ, maka ngwọta ahịa ka mma. Taa, ọtụtụ ndị ahịa na ihe karịrị mba 30 niile Wold nwere afọ ojuju maka ogo na ntụkwasị obi nke ngwaahịa na ọrụ anyị.
FIBC ịcha otu
Jumbo n'ime akpa
FIBC bepụ cors
Ultrasonic ịcha ákwà
Ahịa Nleta News
Taa, ọtụtụ ndị ahịa n'ụwa nile, nwere afọ ojuju maka ogo na ntụkwasị obi nye ọrụ na ngwaahịa anyị.
Akpa liner akpa akpa akpa akpa, a makwaara dị ka akpa akọrọ b ...
Kedu ihe bụ njirimara nke FIBC belt cutter machine?
Atụmatụ: igwe ahụ na-ewepụta ngwaọrụ njikwa microcomputer, akara akara China na Bekee, ...
A n'ichepụta usoro nke FIBC akpa akpa esịtidem ihicha igwe
Utdị mmekọ ahụ bụ nke akụrụngwa akụrụngwa, na par ...
FIBC ọnwụ igwe na-mara dị mgbanwe akpa akpa, ton akpa, ...